Gbanyụọ data na Nhọrọ Mmepụta gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Esi gbanyụọ Onye Mmepụta Nhọrọ na gam akporo
Ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke nkuzi na-atụkarị aro ndị ọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka gam akporo iji rụọ ọrụ nke a maara dị ka "Onye Mmepụta Nhọrọ", ihe na-agụnye ntakịrị aghụghọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ọrụ ole na ole na gburugburu sistemụ arụmọrụ a.
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị agaghị ejide njirimara ma ọ bụ ọrụ ndị a, ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ha ebighị ma ọ bụ kwụsị ọrụ. Maka nke a, anyị ga-eji obere aghụghọ, naanị mkpa ịbanye na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Jikwaa ntọala na sistemụ arụmọrụ gam akporo
Trickgha ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma site na gam akporo 4.0 gaa n'ihu, n'agbanyeghị na ọ dabere na ụdị ngwaọrụ anyị nwere na aka, arụ ọrụ ole na ole nwere ike ịdị iche site na ụdị nke ọzọ; Na nchịkọta, iji gbanyụọ "nhọrọ ndị nrụpụta" na sistemụ arụmọrụ anyị nke gam akporo, anyị ga - agbaso usoro ndị a:
Malite anyị sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Metụ akara ngosi nke «ntọala» ma ọ bụ «ghs »
Lelee akụkụ aka ekpe.
Site na nhọrọ egosiri ebe ahụ, họrọ nke na-ekwu «Aplicaciones".
Họrọ n'aka nri n'akụkụ «Ihe niile"ngwa ndị ahụ.
Nyochaa ndepụta egosiri na ala.
Ozugbo anyi huru onwe anyi na gburugburu a ntọala nke anyị gam akporo sistemụ, tAnyị ga-emecha nyochaa site na ndepụta egosiri na ala otu ngwa nwere aha «Mbido«; Kwesighi ka aha gi gha ju gi anya, dika "nhazi" a dika agasi na obu ngwa ozo nke etinyegoro na sistemu arụmọrụ gam akporo. Mgbe ị na-ahọrọ ya, anyị ga-ahụ interface ọzọ, ebe anyị ga - ahọrọ bọtịnụ nke kwuru «hichapụ data«; Ajuju banyere ihe siri ike ga-abiakute anyi n'oge ahu, ebe anyi ga-ano iji kpochapu ozi nile di na ngwa nke anyi tinyego na ngwa mkpanaka, nke puru ighota ihe ichoro, inweta okwuntughe na ndi ozo nwere otutu ihe.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọgide na usoro a, naanị anyị ga-anabata ihe ekwuru. Site na nke a, anyị ga-arụworị ọrụ ndị nrụpụta agbanyeghị, dịka anyị tụrụ aro n'elu, nke a nwere ike ịdị iche site n'otu ụdị gaa na nke ọzọ na ekwentị mkpanaaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Esi gbanyụọ Onye Mmepụta Nhọrọ na gam akporo
mgbede ọma!! M na-eme usoro ndị a mana nhọrọ nhichapụ data adịghị arụ ọrụ ... enweghị m ike ịhọrọ ya ... enwere ụzọ ọ bụla ọzọ iji mee ya? Daalụ
Zaghachi iji maricel
Enwere m otu nsogbu ahụ, ọ naghị ekwe ka m pịa «hichapụ data» iji gbanyụọ ọnọdụ onye nrụpụta
Ezi m dozie nsogbu ahụ ekele.
Zaghachi Juan Ambrocio Dávila
Ekele m edozi nsogbu ahụ.
Ezigbo mma, agbabeghị m ime ya, ndị ọzọ na-egosi Ntọala ma ị gara
ezi ezi. Daalụ
Zaghachi Martha Estela Fuentes de Arana
Enwere m otu nsogbu ahụ, ọ naghị ahapụ m pịa "ihichapụ data" iji gbanyụọ ọnọdụ onye nrụpụta
Etu ị ga-esi wepu oghere na iPhone gị na ngwa ngwa Mail
Etu esi ewepu mmelite Ọgọstụ nke Microsoft chọrọ